मेलम्चीको ढिलाइमा समस्या कहाँ हाे ? खानेपानी मन्त्रीकाे यस्तो छ संकल्प | mulkhabar.com
December 6, 2018 | 6:35 am 135 Hits
मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने र काकाकूल काठमाडौंलाई तिर्खा मेटाउने कुरा हुन थालेको करिब ३० वर्ष भयो । तर यस बीचमा दर्जनौं मन्त्री र सचिवहरु फेरीए तर प्रतिबद्धता भने पानी खुवाउने नै गरिरहे ।
धेरै नाम चलेका र अनुभव भएका मन्त्रीहरु आउँदा समेत मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने विश्वासिलो आधार बनेको थिएन तर पछिल्लोपटक खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेकी कन्चनपुरकी साँसद विना मगर आएपछि भने मेलम्चीले नसोचेको गति लियो तर पनि भनेकै समयमा मेलम्ची काठमाडौंमा आइपुगेको छैन ।
मेलम्ची सपनाको कुराबाट यथार्थमा विपनामा फेरीन थालेको आभाष भए पछि एकथरी कर्मचारी र वाह्य शक्ति तथा प्रवृत्तिहरु के गरी मेलम्चीलाई असफल पार्ने भनेर लागि नै रहे तर पनि मन्त्री मगर अगाडि वढिरहीन् आफ्नै सचिवालयका कर्मचारीलाई महिनौंसम्म फिल्डमा खटाउनेदेखि लिएर ठेकेदार कम्पनीलाई कार्वाहीको चेतावनी दिँदै निरन्तर मेलम्ची सफल पार्न लागिरहीन् तर उनैले घोषणा गरेको दिनमा भने मेलम्ची आइपुगेन । र शुरु भयो विरोध र आलोचनाको खेती । घेराबन्दी र असहयोगको रणनीति । त्यसैमा एकाथरी मिडिया र तत्व पनि हात धोएर लागे ।
मन्त्री भएलगत्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी खानेपानी मन्त्री बीना मगर अहिले भने चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकी छिन् । मेलम्ची परियोजना सम्पन्न गर्न नचाहने र मन्त्री बीनासँग असन्तुष्ट पक्षले उनीविरुद्ध घेराबन्दी कसेका हुन ।
के भएकाे हाे ?
मन्त्री भएलगत्तै मेलम्ची परियोजनाको अवलोकनका क्रममा मन्त्री बीना मगरले निर्माण कार्यको सम्पूर्ण बेलिबिस्तार मागेपछि आयोजना र निर्माण कम्पनीले दर्शैंसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाल्न सकिने दावी गर्दै रिपोर्ट गरे । यो रिपोर्ट मात्रै विश्वास गरिहाल्ने आधार भने थिएन । तर यही बीचमा विश्व बैंक, मेलम्ची आयोजना, ठेकेदार, परामर्शदातालगायतको संयुक्त बैठकले दशैंअघि नै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल ल्याइ पु¥याउन कार्ययोजना नै तयार गरे ।
मन्त्रीको निरन्तर ताकेता र खबरदारीसँगै यो कार्यतालिका अनुरुप दै्निकरुपमा धमाधम काम शुरु भएको थियो । तर मन्त्रालय श्रोतका अनुसार, यही बीचमा मन्त्रीलाई असफल पार्ने खेल शुरु भयो ।
कहाँबाट भयाे समस्या ?
मेलम्ची आए मन्त्रीले चौतफी प्रशंसा पाउने कुराबाट अत्तालिएका समूहहरुले समग्र निर्माण कार्यमा हस्तक्षेप शुरु गरे ।
श्रोतका अनुसार, मन्त्रालय भित्रैबाट र बाहिरबाट योजनाबद्ध तरिकाले मेलम्चीको पानी समयमा नै आउन नदिने षडयन्त्र शुरु भएको थियो ।
यति मात्रै होइन, मेलम्चीको कामलाई मन्त्रीको स्पिरिट अनुरुप कार्यतालिका प्रभावित गर्ने किसिमले खेल शुरु भयो । र, मन्त्रीले बारम्बार आफ्नो सचिवालयको टीमलाई मेलम्चीको अनुगमनमा पठाएपनि सोचे अनुरुपको काम अघि बढेन ।
कहिले के बहाना, कहिले के बहाना –
श्रोतले भन्यो, “निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताको तहबाट बारम्बार अल्झ्याउने खेल भयो । र, मेलम्ची आयोजनाबाट समेत खासै कडाइका साथ अनुगमन र निर्देशन दिने काम भएन ।”
शुरुमा क्षतिपूर्तिको विषयमा निर्माण कम्पनीले बखेडा झिेकपछि मन्त्रीले परराष्ट्रको च्यानल समेत प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीको हेडक्वार्टरबाट उच्च प्रतिनिधि बोलाएर वार्ता गरिन । यो चानचुने प्रयास थिएन । मन्त्रीको सबै कोशिस कार्यतालिका अनुरुप पानी आओस् भन्ने थियो । त्यतिखेरको पहलले केही गति लियो पनि । तर पछि फेरि उस्तै भयो । मन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धित कर्मचारीले मनैबाट पालना नगर्ने र मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वले समेत यसमा खासै पहल नगरेपछि मन्त्रीलाई बदनाम गर्न चाहनेहरुले मौका पाएको श्रोतको दावी छ ।
मन्त्री बीना मगर आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीबाट अत्यधिक भोट ल्याएर जितेकी सांसद हुन । कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजय हासिल गरेकी मन्त्रीले खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा कार्ययोजना नै निर्माण गरेर उदाहरणी कार्य गर्ने संकल्प बोकेको देेखिन्छ । तर कतिपय कुराहरु सोचेजस्तो भएनन् । एकातिर नेकपा अध्यक्षको बुहारी भएका कारण अध्यक्षलाई निशाना बनाउने पक्षहरुले उनको बदनाम गर्न खोजे भने अर्कोतर्फ विगतदेखि नै खाइपाइ आएका हरुले समेत मन्त्रीको एक्सन देखेर उनलाई असफल बनाउन खोजेको ।
मन्त्रीका बारेमा भ्रम
एकीकृत सूचना संयन्त्र नहुँदा समेत यस्ताे भएकाे केहीले टिप्पणी गरेका छन् । आयोजनाको कार्य प्रगतिका बारेमा आयोजना प्रमुखको एउटा भनाई हुनु र मन्त्रालयको सचिवको अर्को दावी भएबाट झन अन्यौलता सिर्जना भएको छ।
मेलम्ची ढिलो हुनुमा मन्त्री मगरको कुनै हात नभएको र उनको अथक प्रयासपछि पनि यिनै तत्वहरु सक्रिय भएका कारण ढिलाई भएको तथ्य बाेल्दछ । प्रायजसो मन्त्रीहरुको चासो आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न रहने प्रवृति रहेको अवस्थामा मन्त्री मगरले मन्त्री भएपछि त्यता चासो दिइनन् । बरु उनको चासो मात्र मेलम्ची थियो् ।
तर चौतर्फी घेराबन्दी पारिएपनि मन्त्री मगरले आफूले संकल्प भने पूरा गर्ने बताएकी छिन् । काम गर्दै जाने क्रममा नियत सफा भएपनि प्राविधिकरुपमा कतिपय कुरामा ढिलाई हुन्छ । सोचे अनुरुपको काम अघि बढ्दैन । तर नियत र मन सफा भए यसले एकदिन राम्रो परिणाम ल्याउने मन्त्रीको बुझाई छ ।
तुलनात्मकरुपमा हेर्दा मेलम्ची आयोजनाको यति लामो यात्रामा पहिलोपटक यति बढी चासो र कार्यप्रगति भएको कुरा भने कसैले नकार्न सक्दैनन् । यो सबै काम मन्त्री मगरले विशेष चासो र सतर्कता नअपनाएको भए हुने थिएन ।